မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Payment of Tariff စနစ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Tourism Latest News
← ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၊ Rose Garden ဟိုတယ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ၊ ငွေဆောင်ဟိုတယ်ဇုန်တွင် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအား တွေ့ဆုံမှာကြား၊ ဧည့်လမ်းညွှန် အထူးသီးသန့်မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်မှာကြား
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများ တည်းခိုနားနေမည့် အိပ်ဆောင်များ စားသောက်ခန်းမများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး →
မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Payment of Tariff စနစ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted on February 6, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ-၆ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်အား ဥရောပ ကော်မရှင်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိနှင့် သံအမတ်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူ Mr. Thierry Rommen မှ ယနေ့နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီအချိန် တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမသို့ လာရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Payment of Tariff စနစ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ တင်ရွှေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ခေတ္တဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ရုံးအဖွဲ့မှူးတို့တက်ရောက် ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.	← ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၊ Rose Garden ဟိုတယ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ၊ ငွေဆောင်ဟိုတယ်ဇုန်တွင် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအား တွေ့ဆုံမှာကြား၊ ဧည့်လမ်းညွှန် အထူးသီးသန့်မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်မှာကြား